Mobilada Saddexda Kursi Bixiyaha Musqulaha Feejignaanta ah ee Qiimaha Warshadda - ZNZK
1. Rakibidda oo ka fudud tan makiinadda dharka lagu dhaqo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ku qalabeyso biyo iyo koronto.
2. Sii khibrad adeegsi raaxo leh oo u dhiganta adeegga hudheelka xiddigga ah.
3. Muuqaal qurxoon oo moodada.
4. Gudaha waa nadiif iyo nadaafad, waxaa ku rakiban weelka lagu dhaqo ee laalaada iyo musqusha dhexdeeda waana wax aan waxba ka jirin dhinacyada indhoolayaasha oo anfacaya oo nadiifin kara.
5. Naqshad dhaqaajin ah oo loo guuro waqti ka waqti, sida xaaladdu noqon karto.
6. raqiis noqoshada sare.
7. Waxay leedahay meelo badan oo lagu dabakhi karo oo ah goobo muuqaal qurxoon, kaam deegaan fasax ah, dhul saliid, miino, goob dhisme, dayactir cusub oo tuulo ah.
Hore: Lix Kursi Musqul Musqulaha Bannaanka Dibadda ah
Xiga: 2021 Labada Kursi ee Ugu Fiican Trailer Musqusha Musqusha Mobile
Musqulaha Vacuum Tayada Sare
Musqusha Isugeynta Fasaxa
Vacuum ahama ahama Biriijka xoqidda
Musqulaha Fayadhowrka Biyaha Saaranaya